News – Page 8 – Daily Som
Wareega Koobaad ee Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka oo la soo gabgabeeyay
By Staff on April 30, 2018 News
Waxaa goor dhawsoo dhamaadaywareegaKoobaad eedoorashada GudoomiyahaGolahashacabka oo ayku tartamayaa 10 murashax. XildhibaanadaFedaraalka ayaa ucodayaymurashaxiinta waxaana goordhaw bilaaban doontaTiririnta Codadka Doorashada waxaana laga yaabaa in loo baahdo wareeg labaad. sida aan warka hore ku soo sheegay musharaxii helaa 51% ayaa noqonaya Gudoomiyaha xige ee baarlamaanka hadiisa la waayo waxaa noqon doonta wareeg labaad iyada oo ay […]
Warkii ugu dambeeyay Doorashada Gudomiyaha Baarlamaanka Musharax loo saadaalinayay ootanaasulay
War hada soo dhacay ayaa sheegaya in uu goordhaw Tanaasulay Gudoomiyhii hore ee Baarlamaanka FedaraalkaKMG ahaa ee soomaaliya kana mid ahaa musharaxiinta utartamayay xilka Gudoomiyuaha Golaha shacabka Shiikh aadan maxamed Nuur aadan Madoobe. Madoobe oo khudbad kooban jeediyay ayaa sheegay in uu go’aansaday in doorashada Gudoomiyaha Golaha Shacabka ka tanaasulo isla markaana uu ka mid […]
Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Xarunta Golaha shacabka ee muqdisho sawiiro
goordhaw ayaa la filaya in ay mudnayaasha Baarlamaana doortan 11 murashaxmidkood kuwaas oo ku loolamaya qabashada xilkaas oo uu iska casilay Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed shiikh cusmaan jawaari. waxaa xarunta baarlamaanka si xowli ah uga sii qulqula mudanyaasha baarlmaanka kuwaas oo xarunta ugalaya raxan raxan iyaga oo kala taageersan Murashaxiinta tartamaya. sidoo kale xarunta […]
By Staff on April 29, 2018 News
Madaxweynaha dalka Philippines, Rodrigo Duterte ayaa sheegay in dadka u dhashay dalkiisa uu ka mamnuucay inay u safraan dalka boqortooyada Kuwait oo ka mid ah dalalka khaliijka, ka dib markii si fool xun loo dilay gabadh udhalatay dalka Philippines oo ka shaqaynaysay dalkaas. Madaxweyne Duterte ayaa uyeeray dadka hada ku sugan dalka kuwait una sheegay in ay […]
Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka Sergey Lavrov o la kulmay wasiirada dhigiisa ah ee dalalka Turkey ga iyo iraan ayaa sheegay in Maraykanka uu doonayo inuu kala qeybiyo dalka Syria isla markaan uu dhagaha faraysanayo baaqyada loo soo jeedinayo iyo shuruucda caalamiga ah ka gadaal weerar gantaalo ah oo lagu weeraray dalkaas. Kulankan ayaa waxaa looga […]
Imaaraatka Carabta oo ku bixinayay Malaayiin Dolar Gudoomiyaha Cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya
iyada oo maalinta bari ah ay dhici doonto Doorashada Gudoomiyaha Golaha shacabka ayaa waxaa soo baxaya warar badan oo ku saabsisan Murashaxiinta utaretamaya oo mid kasta uu wato xisbi iyo qar ay wataan dolwdo shishieeye. Dowlada Imaaraatka carabta ayaa la sheegay in ay wadato dhowr xildhibaan oo qaarkood la fahansanyahay, halka aan qaarkood la fahamsanayn […]
Ciyaartooyda Soomaaliya bari la ciyaara Finalka CECAFA U17 qaranka Tanzania
By Staff on April 28, 2018 News
Ciyaartooyda Xulka qaranka Soomaaliya ee da’doodu ee 17ka sano jirada ayaa u soo baxay cayaarta finalka ah ee koobka CECAFA U17 ee ka dhacaya dalka Burundi, ka gadaal markii ay ku dar dareen 1-0 kaga xulka koobka difaacanaya ee Uganda. ciyaartooyda Soomaaliya ayaa la ciyaari doono maalinta bari kooxda qaranka Tanzania waxaana la filaya in […]
Mdaxwayne Waare oo shir Jaeraa’id ku dhex qabtay halka ay ku fataheen biyaha Wabiga shabelle
By Staff on April 27, 2018 News
Hogaamiyaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa qaylo dhaan xoogan udiray Dowlada iyo shacabka Soomaaliyeed asiga oo shir ku dhex qabtay Halka ay biyaha ku fataheen ee magaalada Balawayne. Madaxwayne Waare oo biyaha ku dhex jira ayaa sheegay in biyaha Wabiga Shabeelle dhaafeen xadiggii caadiga ahaa ee uu ku fatahi jiray Magaalada. “dhulkii caadiga ahaa […]
Wararkii ugu dambeeyay ee anu ka helayno Guddiga Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Fedaraalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegaya ij aysan imaan doonin wax korjoogta ah oo ka socda Beesha Caalamka. Doorashadaan oo dhici doonta 30 ka bishaan ayaa qaban qaabadeeda waxa ay muqdisho uga socotaa si heer sara ah, waxaana laga dareemayaa Guud ahaan magaalada Muqdisho […]
Booliska Nageria oo gacanta ku dhigay dad ka ganacsan jiray Ilamaha Agoonta ah iyo kuwa aan aabaha lahayn
Magaalada Lagos ee dalka Nageria ayaa waxaa ka imaanaya war argagax leh oo ku saabsan Ganacsi sharci daro ah oo lagu kala iibsanayo Caruurta agoonta ah iyo kuwa aan aabaha lahayn. Booliska oo weerar ku qaaday ayaa ka soo furtay Goobta 100 gabdhood iyo 62 wiil oo halkaas lagu kala gadan lahaa. dadka maamula goobta […]